SAWIRRO: Guddiga Tiro-koobka Shaqaalaha dawladda Puntland oo bilaabay Tiro-koobka rasmiga ah – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Madaxweynayaasha Somalia & Burundi oo kulan yeeshay 1 hour ago
Dagaal culus oo ka dhacay furimaha hore & Khasaare xoogan oo laga soo sheegayo jiidaha 2 hours ago
DAAWO:Halis xoogan oo ka taagan Bosaso & Goobo dowladdu haysay oo la guranayo kadib markii…. 2 hours ago
DAAWO:Siyaasi dagaal culus kala dhaxeeyey Farmaajo oo afka furtay & Bulshada Soomaaliyeed oo u midoobay difaacida dalka 3 hours ago
DAAWO:Shacabka Soomaaliyeed oo u midoobay difaaca dalka & Sawir la yaab leh oo duulaanka Kenya….. 3 hours ago
Home 2017 April W.Gudaha, Wararka Maanta SAWIRRO: Guddiga Tiro-koobka Shaqaalaha dawladda Puntland oo bilaabay Tiro-koobka rasmiga ah
April 25, 2017 |by W LAASCAANO| 0
GAROOWE(P-TIMES)- Guddiga Dibu habeynta Shaqaalaha dawladda Puntland ayey u tahay maalintii labaad oo ay si rasmi ugu guda-jiraan tiro-koobka guud ee Shaqaalaha rayidka ah, oo shalay ay daah-fureen Masuuliyiinta Madaxtooyada, Guddiga Dibu habeynta & Wasaaradda Shaqada iyo Shaqaalaha ee dawladda Puntland.
Shaqaalaha la tiro-koobay ayaa bogaadiyey talaabadan ay qaaday dawladdu, waxayna cadeeyeen in ay ku qanacsan yihiin go’aamada dawladda ee la xariirta helitaanka tirro rasmi ah oo ah Shaqaalaha dawladda.
Saraakiishu waxay sheegeen in ay shaqadan si toos ah uga socon doonto gobalada oo dhan, isla markaasna ay talaabadan qeyb ka tahay qorshaha horumarinta oo ay ka wada shaqeyn doonaan dawladda iyo Bangiga Aduunka.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Shaqada & Shaqaalaha dawladda Puntland oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan talaaboyinka tiro-koobka, isagoo cadeeyey in ay si rasmi ah u tagi doonaan degmooyinka oo dhan.
DAAWO:Siyaasi dagaal culus kala dhaxeeyey Farmaajo oo afka furtay & Bulshada Soomaaliyeed oo u midoobay difaacida dalka